Ady tsy vita tokoa ve ? | NewsMada
Ady tsy vita tokoa ve ?
Par Taratra sur 27/11/2018
Hifantoka eny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana indray ny maso sy ny sain’ny rehetra, rahampitso. Ho fantatra ny marina momba ilay fifidianana filoham-pirenena, fihodinana voalohany, natao ny 7 novambra lasa teo. Raha ny vokatra vonjimaika navoakan’ny Ceni aloha, mirona mankany amin’ny fihodinana faharoa hifandonan’ny kandida Rajoelina Andry sy Ravalomanana Marc ny raharaha. Iry voalohany anefa, na nandresy aza, nitondra fanakianana momba izay nolazainy fa hala-bato sy tsy fahatomombanana ny fanisana ny vokatra. Tsy hino sy hanaiky izany koa anefa ny iraisam-pirenena. Mbola nanome volabe efa ho 1 tapitrisa euros mahery, ohatra, ny Vondrona eoropeana hoentina miatrika ny lalao amin’ny 19 desambra ho avy izao. Ao ny milaza fa ho hita eo tokoa ny hoe iza amin’izy roa lahy mianaka no nanana ny rariny ny taona 2009.
Aoka kosa hazava fa noho ny antsojay nahazo azy fony izy ben’ny Tanànan’Antananarivo Renivohitra no nampitroatra an-dRajoelina Andry ka nahatonga azy nanohitra ny jadona sy ny tsy rariny nataon-dRavalomanana Marc sy ny ekipany. Teo ihany koa ny vava tsy ambina toy ny hoe “raha mbola misy tany hototofana any dia ataoko” nefa efa nilomano tao anaty tondradrano ny maro anisa noho ny fanotofana tany tetsy Andohatapenaka. Tao koa ny hoe “tsapao aloha ny herinao vao mitsapa ahy”. Kanjo lasa nitsoaka matanjaka rehefa tonga tokoa ny tokoa. Raha izay lasa izay no hijerena ny ho avy, tsy afaka hifamela ny mpifanandrina. Ampy hatsapana fa tsy hisy filaminana eto na iza na iza hivoaka mpandresy eo raha dinihina ireo faniratsirana manenika ny tambajotra sosialy.
Tsy mahay maka lesona mantsy ny mpanao politika malagasy. Efa maro ireo nilaza fa mila manova famindra Rajaonarimampianina Hery fa miavosa loatra ny tsy nety tamin’ny fitondrany ny raharaham-pirenena. Rehefa nahazo vato iray sy roa vao milaza fa mba voan’ny hala-bato koa, hono, izy. Asa raha mbola hisy izany “Fisandratana 2030” izany na navalon’ny tantara.